Kit kitapo asidra nokleika aretina
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fitadiavana haingana sy ny fizahana aretina amin'ny biby.
Ity andiany ity dia vokatry ny "NAVID", orinasam-pianakavian'i Janma gen.
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fitadiavana haingana sy ny fisavana ny zavamiaina bitika bitika toy ny staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella ary bacillus cereus.
MP Detection Acid Detection Acid dia ampiasaina amin'ny fitiliana ny Mycoplasma pneumoniae ADN amin'ny swabs nasofaryngeal sy ny lavage bronchoalveolar.
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fitiliana kalitao ny gripa gripa A sy ny asidra nukerenan'ny virus B influenza ao anaty tenda ary ny sputum an'ny marary in vitro.
Ho an'ny fitehirizana sy ny tsy fampiatoana ireo santionan'ny virus (Type E), ny fitrandrahana haingana ireo asidra niokleika (ADN / RNA) (Type S / Type E), ny vokatra voadinika dia azo ampiasaina amin'ny famaritana klinika amin'ny IVD.
Ny vahaolana tanteraka amin'ny SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
Ny teknolojia ASEA, andiam-pamokarana asidra nokleika vaovao izay novolavolain'ny orinasa tsy miankina, dia teknolojia fikarohana asidra nokleina haingana sy tsotra ary haingana, izay afaka mamita ny fizotrany rehetra manomboka amin'ny "santionany amin'ny valiny" ao anatin'ny 35 minitra, ary mahatsapa fanatsarana lehibe ny fitiliana asidra niokrika hatramin'ny "haavon'ny ora" ka hatramin'ny "haavon'ny minitra".
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo fitsapana haingana an'i China, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo tsy misy fitrandrahana, Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana,